Ị nwere ike inyere m aka ịghọta Amazon ogo algorithm?
Ama algorithm Amazon maka ịchọpụta ngwaahịa (nke a makwaara dị ka A9) ka a na-emepụta ngwaahịa dị iche iche nke mere na mgbe onye ahịa ahụ na-achọ ihe ụfọdụ maka ire ere - achọtara nsonaazụ ọchụchọ dị mkpa ma nye ya naanị n'ime nzọụkwụ abụọ. N'iji nkenke, mgbe onye nwere ike ịzụta ihe na-achọpụta ngwaahịa, Amazon ranking algorithm na-eme ihe kasị mma na-agbalị ịnye nsonaazụ kachasị mma nke ga-eme ka onye ahịa rịọ gị. Na mgbe Google na-egosi nsonaazụ na-enye azịza kachasị mma na njụ-ajụjụ ọchụchọ nke onye ọrụ ahụ abanye, Amazon ranking algorithm na-elekwasị anya n'igosi kpọmkwem ihe ngwaahịa onye ahịa ahụ ga-azụta.Ọ pụtara na usoro nke ogo ngwaahịa dị na Amazon bụ ihe dị mfe karịa, ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere usoro yiri nke ndị isi engines dịka Google n'onwe ya, yana Yahoo, Bing, wdg - trade for laptop.
Main Factors for Amazon Ranking Algorithm
E mere n'ozuzu, ihe bụ isi nke Amazon ranking algorithm bụ iji hụ na ọnụego ego ọ bụla onye ahịa na-azụ ihe Ebe ahụ. N'etiti ndị ọzọ, nyocha njikwa search engine nke Amazon na-aga ịkụ nzọ dị iche iche. Ekwuru m na enweghi njirimara nke kachasị mma na Amazon - ọ naghị echebara òkè ọdụm nke ihe ndị dị na SEO, dị ka mgbasa ozi ọha na eze, njikọ njikọ, ikike mpaghara, na ihe ndị ọzọ. Dị ka m kwuwororịrị, isi ihe mgbaru ọsọ nke Amazon ranking algorithm bụ iji nweta ọtụtụ n'ime oke ntinye ego site ahịa (RPC). N'ihi ya, isi ihe A9 na-etinye na akaụntụ dị ka ndị a:
Ọnụ ọgụgụ ntụgharị - na-emekarị ka nlele ndị ahịa gị, ọnụahịa asọmpi, na àgwà oyiyi ngwaahịa.
Ntọala & Njikere nke Ndị Ahịa - mgbe ihe kachasị mkpa bụ nke aha ngwaahịa na nkọwa ngwaahịa ahụ kwadoro, a na-ahụkwa ọkwa dị mma nke ndị ahịa n'etiti ihe ndị dị mkpa kachasị mkpa Ebe ahụ.
Njide - ihe ndị a na-emekarị ka ọ gbanwee n'ogo nke ODR (ntụpọ ntụpọ ntụpọ), yana nzaghachi site na onye ere.
Dị ka A9 Amazon algorithm ogo, enwere ike inweta nanị site na-eme ka ndị ọzọ na ndị ahịa obi ụtọ ma na-edebe ha ugboro ugboro laghachi azụ ọzọ zụrụ n'ebe ahụ. Ma, rịba ama, na ọ bụghị na RPC kacha elu, Amazon na-eche na njide nke ndị ahịa. Ọ pụtara na mgbe ị na-emepụta ụfọdụ ngwaahịa, Amazon na-eji ọ bụghị naanị ọnụego nke ntughari, kamakwa ụkpụrụ ha na-atụ anya ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Amazon nwere ike ịtụ anya na a ga-akwatu ya, nyere ya na ọnụahịa ọnụahịa maka ngwaahịa ụfọdụ dị elu karịa ọrụ ndị ọzọ yiri ngwaahịa ndị a hụrụ na ahịa. Chetakwa, njirimara nke ngwaahịa ngwaahịa gị na akụkụ ọ bụla jupụtara na ya dị ezigbo mkpa maka Amazon ranking algorithm. Ya mere, ị ga-ezere inwe oghere ọbụla ma ọ bụ ezubeghị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ohere ọhụụ karịa ka egosipụtara n'elu SERPs n'elu ihe dị mkpa dị mkpa site n'aka onye ahịa ahụ.